WunYan – Page 190
တစ်သက်လုံး ခွေးအကိုက်မခံရသော နည်းလေးမျှဝေပါရစေ
အဘိုးဖြစ်သူပြောပြခဲ့ဖူးပါသည်…. “လူကလေး ညဖက် ခရီးသွားတဲ့အခါ ကောင်းကင်က ကြယ်ကြွေတဲ့ အခိုက် ကြုံရတတ်တယ်ကွယ့်” အဲ့ဒီလိုဆုံရင် မြေကြီးပေါ် ခြေစုံရပ်ပြီး ညာလက်ညှိုးနဲ့ ဘယ်လက်ဖဝါး ပေါ်မှာ “ခွေး” ဆိုပြီး ရေးဖြစ်အောင်ရေး… ( ဖိနပ်ဝတ်မထားရဖူးနော် ) “နောက်တစ်ခါ ထပ်မြင်ရင် ဘယ်လက်ညှိုးနဲ့ ညာလက်ဖဝါးပေါ်မှာ အဲ့ဒီလိုပဲ ထပ်ပြီးရေး။ (အဲ့ဒီလို ဘယ်လက်ညှိုးနဲ့ရေးတဲ့အခါ
အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝရဖို့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် ပုံစံများ
အိမ်ထောင်ရေးသုခ ရဖို့ဆိုတာ ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ သွေးသားဖလှယ်မှုကလည်း အခန်းကဏ္ဍတခုအနေနဲ့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ပျော်စရာ ကမ္ဘာအဆုံးထိ ခေါ်သွားနိုင်တဲ့ နည်းတွေ လူတွေက သုတေသနပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို လေ့လာခဲ့ရာကနေ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အထွဋ်အထိပ်ဆိုတဲ့ အရသာ အပြည့်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ပုံစံတွေ လေ့လာမှတ်သားနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Doggy
ကံကြမ္မာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ရလေမလား ကံဆိုးလိုက်တာ ကလေးရယ်
ကံကြမ္မာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ရလေမလား ကံဆိုးလိုက်တာ ကလေးရယ်’ရွှေဝါ (၂) ရပ်ကွက်၊ မြို့လှ ကျောက်တောင် အခြမ်းမှာ နေတဲ့ သားလေး မောင်စွမ်းထက်အောင် အသက် (၂) နှစ် မိဘတွေ စပါးရိတ်သွားချိန် အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ အဖွားဖြစ်သူနဲ့ တစ်မနက်လုံး ဆော့ကစားနေရင်း ပျော်လို့ပေါ့ မနက်စာ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ မြေးဖြစ်သူ စားဖို့ အဖွားဖြစ်သူက မီးဖိုချောင်ထဲ
ဂျင်း နဲ့ မြေ ဖြူ ကို သာ ရော ထောင်း ပြီး လိမ်း လိုက် ပါ။ ဆေး ရုံ ၃ လ တက် တဲ့ လူ တောင် ၃ ရက်ပဲ လိမ်း တာ ဒူး နာ ပျောက် သွား
Newer 1 … 188 189 190 191 192 … 332 Older